Nduzi Oge Crazy na Nyochaa - site website - jluis37.com
Oge Crazy bụ egwuregwu cha cha na-egwu egwu na egwuregwu egwuregwu nke Evolution Gambling mepụtara. N’etiti ime ihe ahụ, ego ego nwere 54 ngalaba dị iche iche. Egwuregwu ahụ na-akwado wiilị, nke na-akwụsị ma ọ bụ ego ma ọ bụ otun’ime egwuregwu self love anọ. Enwere ike ịgbakwunye ọtụtụ ndị na – eme ọtụtụ ihe na mmeri ahụ, na – eme ka ndị egwuregwu laa n’ụlọ ruo .000 500.000.
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu na youtskwụ .gwọ
Ebumnobi nke Oge Crazy bụ itinye nzọ na akụkụ nke wiil ahụ ga-akwụsị na. Wheelkwụ ego nwere ngalaba 8 dị iche iche. Egwuregwu ahụ dị nnọọ ka Dream Catcher, egwuregwu ọzọ dị ndụ nke Evolution Betting mere. Na tebụl dị n’okpuru, ị nwere ike ịhụ nkwụsị nzọ niile dị na otu akụkụ ole dị na wiil ahụ.
Ọ bụrụn’ị buru amụma ziri ezin’ ọnụ ọgụgụ ziri ezi, mbọ gị ga-aba ụba website Id ngalaba wiil kwudoro.
• Nọmba 1 na-akwụ 1x
• Nọmba two na-akwụ ụgwọ 2x
• Nọmba 5 na-akwụ 5x
• Nọmba 10 na-akwụ 10x
Betgba nzọ na ngalaba self na-enye ndị egwuregwu ohere isonye na egwuregwu ọzọ nke na-esote mbido mbụ nke wiil ahụ.
Etu esi egwu egwuregwu
Tupu egwuregwu ọ bụla, ndị egwuregwu ga – enwe sekọnd iri na ise iji tinye otu ma ọ bụ ọtụtụ nzọ na mpaghara 8 dị iche iche na wiil ahụ. Mgbe oge ịkụ nzọ ahụ gwụrụ, onye na-eweta ya na-atụgharị wiil ahụ miniature chere ka ọ kwụsị. Flapper dị n’elu na-egosi nhọpụta mmeri. Agba nke ọ bụla nwere ike inwe naanị otu mmeri.
Egwuregwu bụ isi nke Crazy Times nwere akụkụ abụọ. E nwekwara a 2-ukwu-agba elu oghere na-arụ ọrụ na gburugburu ọ bụla yana ego ego. The Best oghere na-ebu multipliers nke nha dịgasị iche iche.
Ndị na – eme ọtụtụ ihe that a nwere ike ịbawanye ịkwụ ụgwọ maka ngalaba mmeri. Ọ bụrụ t a ga – ebufe onye na – abawanye ihe na egwuregwu, egwuregwu 1st na 2nd nke Best Slot kwesịrị ịhazin’ụzọ ziri ezi. Akpa mbu na-akwụsị na otu n’ime ngalaba 8, ma n’otu oge ahụ, eriri abụọ nke 2nd kwesịrị ịkwado na ọtụtụ. Naanị nzọ nzọ egosiri t shirt Slot nwere ike ịba ụba maka gburugburu ahụ. Ọ bụrụ na okpukpu abụọ ahụ adabaghị na akara ojii, a ga-egwu egwuregwu ahụ na-enweghị ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu nke egwuregwu ndị na-ere ahịa na-ebi ndụ, anyị na-atụ aro ka ị lelee ngalaba Live Casino na Stake.com.
Ọ bụrụ na mpempe akwụkwọ that a na-akwụsị na otu egwuregwu egwuregwu 4, egwuregwu ọhụụ malitere. Naanị ndị na-etinye ego na egwuregwu egwuregwu that a ka nwere ike isonye ma merie ihe nrite na egwuregwu ego. A na-ebugharị ọtụtụ ihe website t shirt Spin t egwuregwu self love ma ba uba na mmeri na-akwụghachi ụgwọ na gburugburu ndị ahụ.
Hchụ nta self
Ego a na-egosiputa mgbidi na 108 di iche iche di na ya. A na-eme ka ndị na-eme ka ndị na-eme ihe ntụgharị banye d e akara ngosi na-enweghị atụ website t onye na-eweta ihe ma na-agbanye gburugburu ụlọ. Ebumnobi gị bụ gbaa egbe ala na foto ị kwenyere d e ọ na-ezo ọtụtụ kacha elu. Ndị egwuregwu niile na-eme nhọrọ nke aka ha ma merie ụgwọ ọrụ dị iche iche. Mgbe onye obula gbagburu akwukwo un, a ga-agbanwe akara di iche iche na ndi na-aba uba, a ga-akwụkwa onyinye niile.
Mkpụrụ self-evident Twist
Mkpụrụ self indulgent Flip bụ ihe dị mfe isi ma ọ bụ ọdụ ọdụ nke gụnyere ịhọrọn’etiti agba abụọ: Red ma ọ bụ Blue. Agba ọ bụla na-enweta ọtụtụ ntinye aka na ya. Onye na-egwu egwuregwu ahụ na-atụgharị mkpụrụ self service ahụ, na ụcha nke chere ihun’elu bụ onye mmeri. Egwuregwu egwuregwu that a nwere atụmatụ mgbapụta nke mgbapụta nke nwere ike ịmalite ma ọ bụrụ d e ekenyela uru ọnụọgụ dị ala.. Ọ bụrụ na nke ahụ emee, a ga-atụgharị mkpụrụ self service ahụ ọzọ website Id iji ọtụtụ ọnụọgụ.
A na-agba ngwugwu ngwugwu Pachinko na mgbidi nwere 16 na-agbatị ọtụtụ na mpaghara abụọ na ala.. N’elu mgbidi ahụ, a ga-eme ka ebe a na-akụ puck pụta ìhè. Onye na-egwu egwuregwu ahụ na-atụba nkịta website Id mpaghara ahụ, puck na-agbadakwa mgbidi ahụ na-agba aka ekpe t ụzọ nri ka ọ na-akụtu ụzọ.
Ihe otutu ndi puck na-abawanye na ihe onye na-egwu egwu mgbe a na-aguta ugwo. Ọ bụrụ na ndị puck ada t a abụọ mpaghara, niile multipliers ga-okpukpu abụọ, na daashi gburugburu ga-Malitegharịa ekwentị. Enwere ike ịdaba Nnapụta mgbe that a na-akụ puck na ọtụtụ nke 2x, 3x, ma ọ bụ 4x.
Ọ bụrụ na ịchọrọ egwuregwu egwuregwu ụdị Pachinko, anyị na-atụ aro ka ị lelee egwuregwu ndị ọzọ Stake nwere echiche yiri nke a.
Oge Crazy bụ egwuregwu kacha akwụghachi ụgwọ. Ọ na-egwuri t a ọhụrụ na mebere wheel mejupụtara 64 agba na 3 flappersn’elu. Tupu agba agba amalite, ọkpụkpọ ọbụla ga-ahọta n’etiti flapper, acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ odo. Igwe ọhụrụ ahụ na – akwado ndị na – eme ọtụtụ ihe, okpukpu abụọ, na atọ. Ọ bụrụ na otu flapper adaa n’elu okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ, ụkpụrụ nke ndị na-eme ọtụtụ ihe ga-abụ okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ, mana ọ bụ naanị maka ndị egwuregwu ahọpụtara mpempe akwụkwọ ahụ. A ga-atụgharị wiil ahụ ọzọ, naanị maka ha, ruo mgbe ọ kwụsịrị d e mpaghara ọtụtụ.
Oge nzuzu bụ otu egwuregwu egwu kachasị egwu nke ewepụtara na 2020 website t Evolution Gaming. Ihe ngosi un bụ egwuregwu self respecting, ma na-akwụ ụgwọ ọtụtụ ndị na-akwụ ụgwọ dị ka.000 500.000 kwa gburugburu. Ihe ngosi that a na-ebi ndụ nwere oke RTP website t 94.41-96.08percent dabere na ụdị nzọ nke onye ọkpụkpọ na-eme. Gba nzọ ga-eju ụdị egwuregwu ọ bụla afọ n’ihi na ọ ga-ekwe omume ịgbazinye $ 0,10 opekempe. Ndị nnukwu pliers nwere ike ịnwale ọdịmma ha ruo $15.000 kwa ntụgharị.